9 Ihiehie na-egbu egbu na-eme ka saịtị ghara ịdị nwayọ | Martech Zone
Ntanetị weebụsaịtị na-emetụta ibiaghachi udu, ọnụego mgbanwe, na kwa nke gị search engine rankings. Nke ahụ kwuru, ọ tụrụ m n'anya na ọnụ ọgụgụ saịtị ndị ka na-adịghị nwayọ nwayọ. Adam gosiri m saịtị nke taa kwadoro na GoDaddy nke na-ewere ihe karịrị 10 sekọnd iji kwado. Onye ogbenye ahụ na-eche na ha na-echekwa ego ole na ole na nnabata… kama ha na-efu ego ha n'ihi na ndị ahịa na-agbazinye ha ego.
Anyị emeela ka ndị na - agụ akwụkwọ anyị dịkwuo ntakịrị ebe a, enweghị m obi abụọ ọ bụla na ụfọdụ ihe ịga nke ọma bụ n'ihi na anyị kwagara Flywheel, Ejiri WordPress jikwaa nnukwu caching na a Nzipu Nwepụta ọdịnaya kwadoro site na CDN StackPath.
Nke a bụ mmejọ na-egbu egbu nke 9 na-abawanye oge ị na-ebu oge:
Enweghị Caching - hụ na ebe nrụọrụ weebụ gị na-eji Caching iji mee ka ọsọ ọsọ. Usoro njikwa ọdịnaya nke oge a na-echekwa ọdịnaya n'ime nchekwa data ma jikọta ya na ndebiri ndebiri iji mepụta peeji ewepụtara. Ihe nchekwa data a na-ebipụta na mbipụta dị oke ọnụ, yabụ igwe mkpuchi na-echekwa mmeputa maka oge dị elu ka enweghị ajụjụ dị mkpa.
Ọtụtụ Ntugharị - zere iji ihe ndị agbakwunyere na-ebugharị na ibe ndị ọzọ. Na ahu nagide kpọmkwem njikọ n'ime gị onwe gị igodo. Otu ihe atụ bụ ma ọ bụrụ na saịtị gị nwere nchedo, ịchọrọ iji hụ na mmewere ọ bụla na saịtị ahụ, dịka onyonyo, anaghị ezo aka na URL na-enweghị nchebe ha. Nke ahụ ga-achọ ka onyonyo ọ bụla dị na ibe ọ bụla buzigharị nke ọma na njikọ echekwasiri ike.
Enweghị Nkeji - Ederede faịlụ na CSS nha faịlụ nwere ike ijikọta site na mbenata ihe ndị na-enweghị isi (dị ka ndepụta ntanetị, ịza ajụjụ, taabụ, na oghere. na-arụ ọrụ. Systemsfọdụ usoro CMS nwekwara ike ime nke a na akpaghị aka ka saịtị ahụ na-ebu ibu na ebe nchekwa.
Nnukwu Ihe Oyiyi - Ọgwụgwụ ndị ọrụ mgbe bulite ihe oyiyi kpọmkwem site ha igwefoto ma ọ bụ ekwentị na weebụ… nsogbu bụ na nsogbu ndị a na-abụkarị ọtụtụ megabytes. Tinye ụyọkọ na saịtị gị ma saịtị gị ga-akwụsịlata nke ukwuu. Ngwaọrụ dị ka Kraken enwere ike iji ya tupu ibugo ihe onyonyo - ma ọ bụ jikọta ya na saịtị iji kpokọta ihe oyiyi na-akpaghị aka ka ha wee dị oke mma ma nwee obere faịlụ.
Ndị Obodo Bọtịnụ - bọtịnụ mmekọrịta ndị obodo dị egwu. A na-eburu onye nke ọ bụla n'adabereghị na saịtị mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ obere nlebara anya ka ha na-ebu. Gbalịa iji ọrụ ndị ọzọ ga - eme ka oge ha dịkwuo mma - ma ọ bụ zite bọtịnụ ahụ ka ha ghara imetụta ọsọ ọsọ gị ma ọlị.
Enweghị CDN - netwọk nnyefe ọdịnaya nwere sava gburugburu ụwa na-echekwa ma napụta faịlụ static dị nso na onye ahụ. Iji a CDN bụ a kediegwu ụzọ nke na-amụba gị na peeji nke ọsọ, karịsịa ma ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ nke ihe oyiyi.
Nke a bụ infographic, Ntuziaka 9 iji belata Oge Ibu Oge, si Mgbanwe.
Ngosipụta: Eji m njikọ njikọta anyị na post a.